Nlele nke anọ nke gam akporo Wear 2.0 Onye Mmepụta dị ugbu a | Akụkọ akụrụngwa
Nlele nke anọ nke gam akporo Wear 2.0 Onye Mmepụta dị ugbu a
Ọ bụ ezie na ahịa nke ihe eji ejiji ka dị na obere awa ma ọ bụ naanị Apple Watch na Samsung G3 na-ejide ntakịrị, nsụgharị nke ngwanrọ maka ngwaọrụ ndị nwere sọftụwia Wear gam akporo na-aga n'ihu na-abata. Na nke a ọ bụ anọ preview nke gam akporo Wear 2.0 Onye Mmepụta, na-abịa na ozi pụtara ìhè na arụmọrụ nke sistemụ ahụ.
Fourthdị nke anọ a dị ndị mmepe ugbu a site na Gam akporo Wear ukara website na ụfọdụ atụmatụ ọhụrụ dị mkpa na mgbakwunye na mmezi ndozi ahụhụ na ndozi usoro, metụtara ịbanye na akaụntụ Google ma ọ bụ ikike ịtinye ịkwụ ụgwọ na ngwa ndị a na-ejikọghị maka sọftụwia a.
Ọ bụ eziokwu na mmụba kachasị pụta ìhè metụtara ịdị mfe iji banye na akaụntụ Google na gam akporo Wear 2.0 a, nke ahụ bụ ga-eme site "otu aka" na elekere na nke a gbatịrị ndị ọzọ na ndị mmepe, na-ekwe ka iji API a. Na mgbakwunye, a na-ewebata isiokwu nke ịkwụ ụgwọ na ngwa nke ala, ihe ga-adị mfe iji ozugbo anyị debanyere koodu ọnụọgụ ọnụọgụ anọ na akaụntụ Google, nke a ga-adị njikere iji zụta anyị.
Na ụkpụrụ, ụdị a maka ndị mmepe ga-aga n'ihu na-eme ka ọrụ na nhọrọ dịnụ dịwanye mma, ihe dị mkpa na nke a bụ na a naghị eleghara mmelite ọhụrụ ahụ anya n'agbanyeghị na ha abụghị nke anya ma ọ bụ akwụkwọ ọhụụ maka anyị, mgbe ahụ anyị ga-anụ ụtọ ọrụ ahụ nke ndị mmepe ngwa. N'aka nke ọzọ, mmelite ndị a dị mkpa iji zere ọdịda na smartwatch. Versiondị ikpeazụ nke Android Wear 2.0 dị nso ka ahapụ ya mana enweghị ụbọchị akọwapụtara dị ka nke taa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Nlele nke anọ nke gam akporo Wear 2.0 Onye Mmepụta dị ugbu a
BioShock na-agaghachi na Xbox One na ozi ọma na - akwụghị ụgwọ
Ihe ngosi nke Samsung Galaxy S8 ọ ga-egbu oge ruo na ngwụsị nke March?